भारी वर्षाका कारण ठाउँठाउँमा बाढी र डुबान : कुन नदीको अवस्था के ? – Chetananews.com
भारी वर्षाका कारण ठाउँठाउँमा बाढी र डुबान : कुन नदीको अवस्था के ?
१८ असार २०७५, सोमबार ११:१९ 130 पटक हेरिएको
काठमाडौं – अविरल वर्षाका कारण देशका बिभिन्न नदी खोलामा बाढी आएको छ । नेपालगञ्ज, वीरगंजलगायतका ठाउँ डुबानमा परेका छन् ।
कर्णाली, बबई र पश्चिम राप्ती नदीमा बाढीको जोखिम बढेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यी नदीमा पानीको सतह खतराको संकेतसम्म पुगिसकेको छ ।
देशभर कुन नदीको अवस्था के छ ? यहाँ हेर्नुहोस्
तराईका जिल्लामा बाढी र डुवानको खतरा
आइतवार रातिदेखि नै शुरु भएको भारी बर्षाका कारण तराईका जिल्लामा बाढी र डुवानको खतरा बढेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सोमवार देशका केही ठाउँमा ११२ मिलीमिटरसम्म बर्षा हुने छ । महाशाखाका सोमवार देशका सबे ठाउँमा मध्यम बर्षा भइरहेको छ ।
देशका पूर्वी र पश्चिमी जिल्लामा भने भारी बर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मातहतको बाढी पूर्वानुमान शाखाका अनुसार देशका कन्काइ, कोसी, कमला, बागमती, नारायणी, पश्चिम राप्ती, बबई, कर्णाली र महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेको छ । यी नदीका तल्लो तटीय क्षेत्रमा डुवान हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ ।
आज झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, सिरहा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासी, कपिलबस्तु, रुपेन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलाली जिल्लामा बाढीको जोखिम रहेको बाढी पूर्वानुमान शाखाले जनाएको छ । तराईका मुख्य शहर जलमग्न आइतवार रातिदेखि नै भइरहेको भारी बर्षाले तराईका मुख्य शहर पनि जलमग्न भएका छन् ।
पूर्वी नेपालको मुख्य शहर वीरगन्ज जलमग्न भएको छ । आइतवार रातिदेखिको बर्षाका कारण सोमवार विहानैदेखि वीरगन्ज जलमग्न बनेको हो । यस्तै पश्चिम नेपालको मुख्य शहर नेपालगन्ज पनि डुवानमा परेको छ ।